Araka ny fampitam-baovaon’ny zandary avy eo Ankadilalana, taksibrosy marika « Mazda » an’ny FIFIAMI izay nandeha mafy tao anaty fiolahana ka tsy voafehin’ny mpanamory no nifanehitra tamin’ny fiarabe marika «Mercedes Benz» iray, ny harivan’ny alarobia 10 jolay teo, sahabo ho tamin’ny 7 ora sy sasany. Avy any amin’ny renivohitry ny Faritra Bongolava ilay fiara vaventy nitondra omby. Noho ny dona mafy nihatra tamin’ilay mpitatitr’olona izay hiankandrefana dia maty tsy tra-drano tamin’izany ny mpamily. Roa tamin’ireo mpandeha ihany koa no naratra mafy ka nomena ny fitsaboana sahaza azy ireo ao amin’ny ivontoeram-pitsaboana an’ny Distrika na CHDR Arivonimamo. Ilay mpitondra taksibrosy izay nodimandry kosa efa nomena ny fianakaviany. Ny zandary ao Arivonimamo no nandray an-tanana ny raharaha. Nisy tamin’ireo biby fiompy ihany koa no naratra. Ilay fiara kely sady iva marika “mazda” no tena voamafy raha mitaha amin’ilay fiara “Mercedes Benz”.